Xafladii Soo dhaweenta buugga Cusub ee London
Monday, 05 March 2012 10:47
Xafladii Soo dhaweenta buugga Cusub ee London, 3rd March 2012 �Somali President Mohammed Siad Barre, His Life and Legacy�
Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ku saabsaneeyd buug cusub oo dhawaan la qoray ee uu qoray qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Mohamed Ibraahim Shire.
Waxaa buuggan uu xambaarsan yahay taariikhda muggaleh la soo bandhiigay qoraaga
buggan Cabdicasiis Ibraahim Cali (Xildhibaan).
Qoraaga buuggan waxa uu si hufan oga hadlay sababtii ku dhalisay inuu isku taxluujiyo ee uu juhdi badan galiyo inuu isku dubarido taarikhdaas kadibna qoro buuggan. Qoraaga oo hadlikiisii sii wata ayaa wuxuu ku qotomiyay qornadan buuggan inay tahay taariikh Lagamamaarmaan u ah Ummadda Soomaaliyeed iyo weliba jiilka dhalinta yare e soo hanaqaaday 21kan sano ee burburku socdo.
Waxaa uu buugan ku saabsan yahay waxqabadkii Kacaankii 21kii October 1969 ilaa 26kii Janaayo 1991 iyo waliba taariikh nololeedkii A. U. N Jaalle Mohamed Siyaad Barre. Xafladddan ayaa waxaa si mug buuxa leh oga hadlay maddaxdii qarankii Soomaliyeed,aqoonyahano, dhalinyaro Soomaliyeed iyo dadkale oo aad u farabadan. Madaxdii iyo masuuliyiintii ka hadashay ayaa waxay ahaayeen masuuliyiin aad u xusto taariikhda dalka Soomaaliya iyo weliba geeska Africa.
Waxaa ka mid ahaa masuuliyiintii ka mida ahaa Dr Cabdulqadir Cali Boolaay, Kaaliyii XHKS Cabdulqadir Haaji Mohamed, Gen Yuusuf Ahmed Salxaan, Wasiirkii hore eewarfaafinta Faarah Daahir Afeey iyo masuuliyiin tira badan oo buddhigo u ahaataariikhdaas muhiinka u ah Ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo halkaas hadalka qaatay aqoonyahano, odayaan, waxgarad, haweenka iyo dhalinyaro kakala socota goboldada dalka. Waxaa halkaas heeso qiiro leh tiriyay abwaanCabdiriaaq Ahmed Faarah (Gaadaco)
Waxaa xafladaan lagu soo bandhigay qaabkii hoggaameed ee dalka Soomaaliya uu ku Gaaray baarka sare ee dowladaha dunida Africa iyo weliba dunida Arabta, sumcad weyna ku yeeshay ama ka kasbaday dalalka caalamka.
Xafladdi ayaa ku soo gaba-gaboowday jawi aad iyo aad ay dadkii joogay ugu qiiroodeen
written by Ayanish_qalbi , April 13, 2012
Asc dhaman somalida melkastu oo ey ku nulyihen inta kadib waxan leyahay allaha uu naxarestu madax weynaheni h0re jalle m0hamed said barre AMIIN!!!AMIIN!!!AM!!! Tinta kadib waxan idin leyahay s0malay an isku dubnan0 oo an dalkena shisheyaha ka cagajin0 kadibna an reer hebal an iska dayn0 oo an isku xukun0 sidi madax weynaheni hore nu xukumi jiray inta wa iga dar daran iyo bararujin "WA BILLAHI TOWFIQ WA SALAMU CALEY KUM"......!
written by Abdifatah iman , April 20, 2012
Mansha allah, madaxweynaha soomaliyeed allah haunaxariisto..somali israac diidaye ha is raamsate daaaaa!.
written by Fartuun , August 16, 2012
Allaha unaxarista jalle mohamed siyad bare janadi fardowsa allaha kawarabiyo wa halyaygi umada somaliyed
written by Kabir xaji aadam(beesodey) , August 17, 2012
Allah unaxariisto madax weynihii horre ee maxamed siyad barre allah kuwarabiyo janada firdowsa madax weyne maxamed siyad waxa uu axaa xalyeygii soomaaliyeed ama geesihii Afrika oo dhan balse xada waa nasiibdaro wan kaxun nahay tani waa halgenkii iyo xormarkii oo aan soogaarney
written by Abdulahi , November 28, 2012
Allaha awooda leh waxaan uga baryayaa inuu janada ku waaro AAMIIN, waayo maamulkiisii ayaan waxbartey iyadoo aniga daryeel la iigu darey oo aan wax lacag ah layga qaadin iminkana ilmahayga waxaa aad culeys iigu ah waxbarashadooda, markasbaan xusuustaa bilaashkaan wax ku bartey,markaasaan u duceeyaa Mohamed Siyaad Ilaahey godka ha nuuriyo
Gurigii Baarlamaankiyo Dekadii Xamarbaa Leh, Berbe...
Aun Allen hau
Somali Prisoner of War
umaheysan in taariikhda somalia sidaan lo keydiyay...
Book Review - Somali President Mohammed Siad Barre His Life and Legacy
..Allah ha u naxariisto Madaxwyne Mohamed Siyaad B...
Waxaan Ahay Naftii Hure - Cabdi Kaamil Cawaale
waxaan la yaabaa dadka heesta calankayka nuuroow c...